‘नयाँ काम गर्दा विवाद हुन्छ, तर पनि समाधान सँगै आउँछ’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘नयाँ काम गर्दा विवाद हुन्छ, तर पनि समाधान सँगै आउँछ’
‘नयाँ काम गर्दा विवाद हुन्छ, तर पनि समाधान सँगै आउँछ’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता March 14, 2018	0 161 Views
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष
बबई गाउपालिका दाङ जिल्लाका विकट स् थानीय तहमध्येको एक हो  । अझ त्यहाका स्थानीयले त बबई गाउपालिकालाई दाङको कर्णाली भने र चिनाउछन् । बबई गाउपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि करिव चार महिना त विवादै विवादमा बित्यो  । जनताको कामले जसरी गति लिनुपथ्योर् लिन नसके पनि पछिल्ला दुई महिनामा भने उल्ले ख्य काम भएको जनप्रतिनिधिहरु बताउछन् । पटक–पटक विवादमा आउने बबई गाउपालिका र त्यहाको विकासका सन्दर्भमा बबई गाउपालिकाका अध्यक्ष भुवने श्वर पौ डे लसग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
गाउपालिकाका गतिविधि के छन् ?
विभिन्न विवादका कारणले शुरुवाती चार महिनामा काम गर्न सकिएन । त्यसपछिको दुई महिनामा थुप्रै काम भएका छन् । हामीले रातदिन नभने र काम गरिरहे का छौ ं । विकास निर्माणका काम धे रै जसो भइसके का छन् । बरु उनीहरुलाई भुक्तानी दिने काम हुन सकिरहे को थिएन । विभिन्न कारणले रो किएको भुक्तानी पनि हामीले हिजो दे खि शुरु गरिसके का छौ ं । हामीले हिउदे सभा पनि सम्पन्न गरिसके का छौ ं । सभाबाट विभिन्न १० वटा ऐ नहरु पारित गरे का छौ ं । अब त्यसलाई पुस् तकाकार गर्न बा“की छ । त्यस् तै नियमावली निर्माणको काम पनि भइरहे को छ । विशे षगरी अहिले शिक्षामा समय दिनुपनेर् अवस् था छ । शिक्षा सुधारका निम्ति अन्तत्र्रिmयादे खि विभिन्न कामहरु गरे का छौ ं । त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो आउने सम्भावना छ । अहिले कक्षा ८ को परीक्षाको तयारी भइरहे को छ । खासगरी हो मसे न्टर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गनेर् गरी काम थाले का छांै  । जसका लागि ११ वटा परीक्षा के न्द्र तो के र काम अघि बढाएका छौ ं । अन्ततः सरकारी र निजी विद्यालयमा हुने शै क्षिक गुणस् तरको दूरी यसपालि घटाउने प्रयासमा हामी छौ ं ।
विकासका लागि गाउपालिकाको आफ्नो प्राथमिकता के हो ?
हामीले तीनवटा कुरालाई विशे ष ध्यान दिएका छौ ं । पहिलो कुरा सडक सञ्जाललाई सबै गाउवस् तीमा पु¥याउने हो  । अकोर् कुरा गुणस् तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स् वास् थ्य यी हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन् । यी मात्रै हो इनन् शुद्ध खाने पानीमा पनि हाम्रो उत्तिकै ध्यान छ । यस् तै पर्यटन पनि बबई गाउ“पालिकाको प्राथमिकताको विषय हो  । यति ह“ुदाह“ुदै पनि बबई गाउ“पालिका जिल्लाकै विकट क्षे त्रजस् तै छ । यसकारणले हामीले गाउ“सम्म अन्य विकासका पूर्वाधार पु¥याउन पनि सडकको आवश्यकता दे खे का छौ ं । साथमा विद्युतीकरण पनि उत्तिकै समस् याको रुपमा लिइएकाले यी सबै कामलाई यथाशक्य संबो धन गर्न हामी दिनरात खटे र लागे का छांै  । हामीले हिजो चुनावका बे ला पनि जनतासमक्ष यी विषयमा काम गछौर् ं भने र प्रतिबद्धता जनाएका थियौ ं त्यसलाई पूरा गरे रै छाड्ने छौ ं ।
चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?
अहिले जति पनि काम भएका छन् हामीले हिजो गरे का प्रतिबद्धताकै आधारमा गरे का छांै  । हामीले बिर्सिएका छै नौ ं कि हिजो जसरी विकास निर्माणका लागि काम गछौर् ं भन्यौ ं, जनताले हामीलाई यो ठाउ“मा पु¥याउनुभयो र सो ही अनुसार बजे ट विनियो जन गरे र कार्यान्वयनको चरणमा छांै  । सबै कुरा अहिले नै पूरा हुन्छन् भन्ने छै न, जनताले पनि त्यो कुरा बुझ्नुभएको छ । हामीले पनि हिजो गरिएका प्रतिबद्धतालाई लत्याएर छुट्टै हिसावले काम गनेर् पक्षमा छै नौ ं । जनताको माग सडक, विद्युतलगायतका काम छिटो हो स् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ त्यो लक्ष पूरा गनेर् तर्फ हामी लागिरहे का छौ ं ।
कार्य प्रगति कति छ अहिले ?
बबई गाउपालिकाको सरकारको ने तृत्व गर्न हामी आउदाखेरि कतिपय गाउ“हरु सडक, यातायातबाट बञ्चित हुनुपरे को अवस् था थियो  । तर अहिले चारवटा गाउबाहे क सबै गाउहरुमा हामीले सडक पु¥याइसके का छौ ं । के ही विकट वस् तीमा पु¥याउन गाह्रो भएको छ । बजे टका हिसावले थुप्रै लगानी लाग्ने भएकाले त्यसको स्रो त कसरी जुटाउने भन्ने मा हामी लागे का छौ ं । हाम्रो गाउ“पालिकाको बजे टले मात्रै त्यहा सडक पु¥याउन सकिने अवस् था नहु“दा थप स्रो त खो ज्ने मा हामी लागे का छौ ं । त्यस् तै बबई किनाराका वस् तीहरुलाई पनि सुविधाका लागि सडक सञ्जालको व्यवस् थापन गनेर् तयारी गरे का छौ ं । खासगरी सामाजिक विकासका लागि के ही अवरो ध हामीस“ग पनि छन् । एउटा कुरा त हाम्रो शिक्षा नीति नै ठीक छै न । हामीस“ग ३४ सरकारी र निजी आठवटा विद्यालय छन् । निजी र सरकारी विद्यालयका बीचमा ठूलो ग्याप छ । तर यी दुई विद्यालयबीचको दूरी कम गनेर् विषयमा हामीले निजी र सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस् थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई स“गै राखे र अनुभव आदानप्रदानको काम पनि गरे र शिक्षालाई कसरी गुणस् तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रयासहरु थाले का छांै  । जबसम्म शिक्षामा सुधार हुनसक्दै न तबसम्म सामाजिक विकासका काम हुन सक्दै नन् भन्ने विषयमा आम साझा बुझाइका लागि वातावरण बनाउने काम हामीले गरे का छौ ं । अकोर् कुरा स् वास् थ्यका दृष्टिले पनि बबई गाउ“पालिका पिछडिएको र जो खिमकै अवस् थामा छ । किनभने अहिले पनि बालविवाह भइरहे का छन् । बालबालिकाले बिहे गनेर् बच्चा जन्माउने क्रियाकलाप भइरहे को अवस् था छ । यो स् वास् थ्यका हिसाबले निकै संवे दनशील अवस् था हो  । यसलाई न्यूनीकरण गनेर् सवालमा सो ही अनुसारको नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । अकोर् कुरा स् वास् थ्य सुधारकै लागि हामीले दुईवटा एम्बुले न्स ल्याएका छौ ं । अब के ही दिनमा ती एम्बुले न्स सञ्चालनमा आउ“दै छन् । अन्य पालिकाले सुत्के रीलाई पाच हजार रुपै या“ दिने निर्णय गरे का छन् ।
हामीलाई के लाग्यो भने सुत्के रीले पा“च हजार रुपै या त अस् पतालमा आइपुगे पछि पाउने हो तर अस् पताल आउनै नसक्ने अवस् था हु“दा बीच बाटो मै ज्यान जाने खतरा हुनसक्छ । कसै को आर्थिक समस् या हुनसक्छ । त्यसै ले पा“च हजार भन्दा पनि ठूलो त आमा र शिशुको ज्यान जो गाउने कुरा हो भने र नियमित गर्भ जा“च गनेर् र सुत्के री हुन आउने हरुलाई निःशुल्क उपचार से वा र घरमै निःशुल्क एम्बुले न्स से वा पु¥याउने निर्णय गरे का छांै  । त्यसो गर्दा स् वास् थ्यमा धे रै सुधार आउ“छ कि भन्ने लागे को छ । अकोर् कुरा आधारभूत विद्यालय र प्लस टुहरुमा बालविवाह बिरुद्ध सचे तना अभियान सञ्चालन गनेर् र त्यसका लागि बाल क्लवहरुलाई नै परिचालन गनेर् गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरे का छौ ं । त्यो अभियानले विद्यालय सुधार र बालविवाह न्यूनीकरणका काममा टे वा पुग्ने दे खिएको छ । त्यसै ले हिजो को हंसपुर, पदमपुर आजको हंसपुर, पदमपुरमा धे रै सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।
बबई गाउपालिकाको के ही भाग निकुञ्ज प्रभावित क्षे त्रभित्र पनि पर्छ, वन्यजन्तु र मान्छे बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गनेर् के ही यो जना छन् ?
बाके राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षे त्र पनि हाम्रो गाउपालिकाका के ही वस् ती छन् । हुन त राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि त्यो क्षे त्रका लागि थुप्रै काम गनेर् यो जना बनाएको छ । त्यहा“को विकासका लागि निकुञ्जले लगानी पनि गर्छ । तथापि हाम्रो क्षे त्र पनि भएको ले के ही गर्न सकिन्छ कि भने र छलफल आरम्भ भएका पनि छन् । जस् तो त्यहा“ आउने वन्यजन्तुलाई नै दे खाएर त्यो क्षे त्रलाई पर्यटकीय क्षे त्रको रुपमा विकास गनेर् कि भन्ने पनि छ । तर विभिन्न जो खिम पनि छन् । मान्छे माथि वन्यजन्तुको आक्रमण कसरी रो क्ने , गरे का खे तीपातीको संरक्षण कसरी गनेर् वा उनीहरुलाई गरिखाने बाटो को विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर हामीले सो चिरहे का छौ ं । यदि त्यसो हुन सके न भने ती वस् तीहरुलाई व्यवस् थापन गर्न नया“ वस्ती विकास गनेर् यो जना पनि हामीले सो चे का छौ ं । अहिले का मानव वस् ती वनमा रुपान्तरण गनेर् र अहिले का के ही सुगम क्षे त्रका वनलाई मानव वस् तीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सो च छ । सो अनुसार के ही कुरा पनि भएको छ । वन मन्त्रालयबाट स् वीकृति पाउन सकियो भने यो काम पनि गर्न सकिन्छ ।
जतिबे ला पनि त्यहाका मान्छे माथि हुनसक्ने आक्रमण वा अन्य नो क्सानीलाई सम्बो धन गर्न के गर्न सकिन्छ ?
मै ले भनिहाले ं त्यो निकुञ्ज आफै ले पनि के ही व्यवस् था गरे को छ । हामी पनि गर्न सक्छौ ं तर अहिले यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छै न । क्षतिपूर्ति दिनका लागि निकुञ्जले सिफारिस माग्दा हामीले दिने गरे का छौ ं । त्यो बाहे क अरु के ही काम भएको छै न । ती वन्यजन्तुका आधारमा आफ्नो आयस्रो त कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने र वन्यजन्तुले खे तीपातीमा गनेर् क्षतिका विषयमा के गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा के ही न के ही गर्नुपर्छ । तर हामी त्यहा पुग्दा कम्तिमा पनि यो ठाउ“बाट अकोर् कुनै ठाउ“मा बस् ने वातावरण मात्रै बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । शत्यसै ले वस् ती विकास गरे र अन्यत्र सानेर् कि भन्ने तिर पनि छलफल थाले का छौ ं ।
स्थानीय तहमा विकासे रकम फ्रिज हुने अवस् था छ भन्ने सुनिन्छ, के हो ?
हाम्रो सःशर्त बजे ट भने को नौ करो ड माथि हो भने निःशर्त बजे ट २० करो ड माथि हो  । मलाई अहिले सम्मको कामको गतिलाई हे र्दा ९५ प्रतिशत विकासे बजे ट खर्च गर्न सक्छौ ं भन्ने लागे को छ । किनभने के ही काम भइसके को छ । के हीमा निर्माण समिति, उपभो क्ता समिति बनिसके को अवस् था छ भने के हीमा टे ण्डरबाट पनि गनेर् तयारी भएकाले मलाई बजे ट खर्च हु“दै न भन्ने चिन्ता छै न । हो के ही समस् या आए । चार महिनासम्म काम गर्न सकिएन । तर पनि अन्य तहभन्दा काममा ढिलाइ भएको छै न ।
बबई गापाले अलि विवादित काम ग¥यो भन्ने सुनिन्छ नि ?
विवादित काम कतिबे ला हुन्छ ? जतिबे ला नया कामको शुरुवात हुन्छ । हिजो कै काम, शै ली, व्यवहारले गरे को भए विवाद हदै नथ्यो हो ला । तर समय परिवर्तनशील छ । परिवर्तित समयअनुसारको काम हामीले गर्नुपर्छ । म के चाहन्छु त भन्दा के ही नया काम गर्नुपर्छ । नया“ काम गर्दाखे री स् वाभाविकरुपले समस् याहरु आउ“छन् । ती समस्याहरुको समाधान खो जे र अघि बढ्नुपर्छ । जस्तो के न्द्र स् थानान्तरणको कुरा, त्यस्तै ठाउको नामाकरणको कुरा तथा ढुंगा गिट्टी बालुवाको कुरा पनि हो ला । प्राकृतिक स्रो त साधनलाई सदुपयो ग गर्दा भएका बे थिति रो क्न खो ज्दा पनि विवाद हो ला ।
त्यति मात्रै हो इन, परीक्षाका लागि हो म से न्टर नपाउदा पनि हो ला यी यावत विषयमा आफूलाई चित्त नबुझ्दा विवादजस् तो पनि भयो हो ला तर यी सबै नया“ काम हुन् । अलि फरक गर्न खो ज्दा विवाद आउछ । बबई गाउ“पालिकामा पनि त्यही आएको हो  । म अध्यक्ष भएर आइसके पछि बबई गाउ“पालिकालाई समृद्ध गाउ“पालिका कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मा छु । त्यो समृद्धि ल्याउन हिजो कै अवस् थाको कामले हो इन । के ही फरक गर्नुपर्छ । फरक काम गर्न खो ज्दा विवाद आएका हुन्, ती सबै समाधान हुन्छन् । हिजो के न्द्र स् थानान्तरणको कुरा ग¥यौ ं । अहिले आएर कानुनी मान्यता पाएका छांै  । नामाकरण गर्दा त साथीहरुले आन्दो लन नै गर्नुभयो । त्यो पनि सबै पक्षबीच छलफल गरे र टुंग्यायौ ं र अरु जति पनि विवाद हो लान् हामी समाधान गरे र अघि बढ्छांै  ।
पाच वर्षमा बबई गापा कस् तो बन्छ ?
बबई समृद्ध गाउपालिका बनाउने यो जनामा हामी लागे का छौ ं । शिक्षाका हिसाबले , खाने पानीका हिसावले बबई गाउ पालिकाको नीति सबै ले नमूना छ भने र सो च्ने किसिमको , स्वास्थ्यका हिसावले बबईमा स्रो त साधनको उपलव्धता नहुदा नहुदै पनि आधारभूत स् वास् थ्य से वा पाइएको गाउ“पालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, सञ्चार सबै सुविधा पुगे को गाउ“पालिकाको रुपमा स् थापित गनेर् छु । त्यसका लागि म कुनै कसर बा“की राख्ने छै न ।
Previous: विवाह दर्ता र नागरिकता बनाइदिने सहमति गरेकै दिन श्रीमान फरार
Next: फचकपुरमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना